Ndizive Ndisekhaya (iApartment yonke). - I-Airbnb
Ndizive Ndisekhaya (iApartment yonke).
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguRishi Raj
URishi Raj yi-Superhost
Indawo yokuhlala ibekwe embindini kwaye iyafikeleleka kwindawo ekufutshane yokhenketho.
Kufuphi kakhulu kumyezo wezilwanyana, imoto yekhebula kunye neegadi zeti.
Yonwabele imfihlo yakho kwaye ikufuphi nedolophu.
Unikezelo lwamanzi olulungileyo nangona kukho ingxaki yamanzi eDarjeeling kunye nokubonelela ngamanzi ashushu okuhlamba.
Ikufutshane kakhulu neendawo zokutyela ezilungileyo ngamaxabiso afanelekileyo ngokutya okulungileyo.
Indawo yayo nangona ibekwe embindini. Kulula ukuhlala ngokusondeleyo kwindlela enkulu. Kulula kakhulu ukuzifumana ezothutho.
4.82 · Izimvo eziyi-186
Kukho indawo yokutyela ezimbini ezikufutshane ukuze ukutya kufikeleleke ngamaxabiso afanelekileyo. Yindawo entle apho unokuphumla khona emva kohambo lwakho oludiniweyo. Indawo engezantsi kwendlela enkulu ezantsi komyezo wezilwanyana.
Umbuki zindwendwe ngu- Rishi Raj
I am very friendly and fun loving person, done my schooling from Rockvale Academy, Kalimpong and did my graduation from St Joseph College, Darjeeling. I am very crazy about bike rides and love to go for a short trip,I love fishing sometimes go with my friends to the riverside and catch some fish and I am very much fond of collecting coins and I like photography. My motto of life is"Live every moment,laugh every day, love beyond words".
I am very friendly and fun loving person, done my schooling from Rockvale Academy, Kalimpong and did my graduation from St Joseph College, Darjeeling. I am very crazy about bike ri…
Ndingakwazi ukukunceda ngokucwangcisa uhambo lwakho kunye nesithuthi. Ndingakuvuyela ukukunceda ngezinye iindlela ngokuxhomekeke kwimfuno yakho, nokuba ndikuse ngeenxa zonke ukuba ndikhululekile. Nceda ungalibazisi ukufikelela kuyo nantoni na.
Ndingakwazi ukukunceda ngokucwangcisa uhambo lwakho kunye nesithuthi. Ndingakuvuyela ukukunceda ngezinye iindlela ngokuxhomekeke kwimfuno yakho, nokuba ndikuse ngeenxa zonke ukuba…